Tag: falanqaynta waqtiga dhabta ah | Martech Zone
Tag: falanqaynta waqtiga dhabta ah
Talaado, Febraayo 25, 2020 Isniin, February 24, 2020 Christopher Parsons
Qiimaha hoos u dhaca iyo sii kordheysa ee hababka falanqaynta xogta ayaa u oggolaaday xitaa bilowga cusub iyo ganacsiyada yaryar inay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka aragtida sare iyo fahamka la xoojiyay. Falanqaynta xogta waa aalad awood leh oo awood u leh kor u qaadista waxtarka, hagaajinta xiriirka macaamiisha iyo hubinta in ganacsiyada ay awoodaan inay aqoonsadaan oo ay xalliyaan arrimaha iman kara si fudud. Barashada wax yar oo ku saabsan aaladaha ugu dambeeyay iyo hababka falanqaynta waxay xaqiijineysaa in ilaha ugu dambeeyay iyo xalalka
Piwik iyo Google Analytics: Faa'iidooyinka Falanqaynta On-Premise
Waxaan haysannay macmiil aan kula talineyno Piwik. Waxay ku dhexjireen arrimo warbixino culus ah oo laxiriira labada Google Analytics iyo falanqeyn shirkadeed oo mushaar lasiiyay sababtoo ah mugga martida ay ku imaanayaan goobahooda. Goobaha waaweyni ma ogaanayaan inay jiraan arrimo qarsoon iyo xaddidaad xog ah oo la leh Google Analytics. Macmiilku wuxuu lahaa koox hibo leh oo websaydh ah sidaa darteed qaadashada gorfaynta gudaha way fududaan lahayd. Oo ay weheliso dabacsanaanta si loo habeeyo
Ganacsiyada nooc kasta leh ayaa had iyo jeer ugaarsi ugu jira siyaabo lagu horumariyo degelladooda iyo in la kordhiyo heerarka beddelaadda websaydhka Shaashadda 'SeeVolution toolbar' waxay isticmaashaa teknolojiyad dusha sare ah, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay eegaan gorfaynta websaydhka iyagoon weligood ka bixin bogga, iyagoo siinaya falanqeyn sax ah oo dhammaystiran oo isha ku haysa. Tiknoolajiyada SeeVolution waxay ka caawisaa dadka isticmaala isla markiiba inay ku hagaajiyaan boggooda iyagoo adeegsanaya aaladda gorfeynta waqtiga-dhabta ah ee abaabusha xogta habdhaqanka, kaas oo la falanqeeyo laguna soo bandhigo si cad
U fiirso booqdayaasha booqdaya, hubi, ku iibso waqtiga dhabta ah!
Monday, August 27, 2012 Axad, Agoosto 26, 2012 Douglas Karr
Falanqeyntu had iyo jeer kuma siineyso tirooyinka qotada dheer iyo safafka habdhaqanka ee aad ugu baahan tahay inaad ku horumariso khibradda wax iibsiga ee khadka tooska ah. Lexity wuxuu leeyahay hal barnaamij, Lexity Live, kaas oo kuu oggolaanaya inaad indha indheyso macaamiisha markay wax booqanayaan, hubinayaan oo wax ku iibsanayaan waqtiga dhabta ah. Lexity Live waa barnaamij bilaash ah oo taageera gebi ahaanba badeecadaha waaweyn ee ecommerce suuqa. Halkan waxaa ku yaal burburka Lexity Live ee deggooda (hubi inaad aragto Demo Live ah): La soco macaamiishaada